Hazo oram-panala misy kapila landihazo | Asa tanana
hazo oram-panala misy kapila landihazo
Jenny monge | | asa-tanana, Karazana asa tanana, Asa-tanana miaraka amin'ny fingotra EVA, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Manao ahoana daholo! Amin'ny asa tanana ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba hanaovana an'io hazo misy lanezy io amin'ny kapila landihazo. Ity asa tanana ity dia tonga lafatra ho an'ny ankizy madinika ao an-trano, satria ankoatra ny tena tsotra dia tsy miraikitra ary azo antoka fa hampiala voly azy ireo. Mazava ho azy fa eo ambany fanaraha-mason’ny rehetra.
Te hahita ny fomba fanaovana an'io hazo misy lanezy io ve ianao?
1 Fitaovana izay ilaintsika hanaovana ny hazo misy lanezy
Fitaovana izay ilaintsika hanaovana ny hazo misy lanezy
Baoritra manga, maitso na mitovitovy loko satria hahatonga ny lanitra, ambadika.
Baoritra loko hafa hanaovana ny vatan-kazo.
Fonosana landihazo. Tsy maninona na manao ahoana izy ireo, fa raha tsy manana sary izy ireo dia ho tsara kokoa.
Ny lakaoly, mety ho ilay anananao ao an-trano, na dia ny kasety misy sisiny roa aza.
Hotapahintsika ny baoron’ny lanitra ny habeny tiantsika ny hazontsika any aoriana.
Rehefa manana ny fiaviana isika dia afaka na manao ny Silhouette ny hazo na manao izany amin`ny baoritra loko hafa, io araka ny safidinao. Raha toa ka manapa-kevitra ny hanapaka ny silhouette amin'ny hazo isika, miaraka amin'ny olon-dehibe manatrika foana ho fiarovana.
Tonga izao ny ampahany mampihomehy indrindra amin'ity asa tanana ity. CHahazo fonosana kapila landihazo sy lakaoly na kasety misy sisiny roa izahay. Hametraka kapila landihazo maromaro eo ambony latabatra isika ary asiana lakaoly kely na tapa-kasety eo aminy...
Mamely! Hozarainay eny amin’ny sampan’ny hazo ireo kapila landihazo ireo, eny amin’ny tany... Ny zava-drehetra mba hijanonan’ny hazo misy lanezy eo amin’ny faritra misy lanezy. Afaka manampy faribolana kely eny amin'ny lanitra manahaka ny lanezy milatsaka ihany koa isika raha tiantsika ny hisian'ny lanezy eo amin'ny faritra misy antsika.
Ary vonona! Vitanay ny hazo misy lanezy. Azontsika atao eo amin'ny talantalana izany, na omena azy na apetraka ao amin'ny vata fampangatsiahana ao an-trano miaraka amin'ny sary hafa vitantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » hazo oram-panala misy kapila landihazo